AJC Urges UN Security Council to Protect Myanmar's Rohingya Population – CRM
AJC Urges UN Security Council to Protect Myanmar's Rohingya Population
Posted on August 31, 2018 Author swelsone	Comment(0)
China and India have refrained from takingaside, but Bangladesh is continuing diplomatic effort to get its powerful neighbours on board The Bangladesh government has invoked the United Nations Human Rights Council (UNHRC) to callaspecial session to discuss the human rights condition of Muslims and other minorities living in Myanmar’s Rakhine state. A notice […]
Nigeria urges end to ‘ethnic cleansing’ in Myanmar
Posted on September 12, 2017 Author swelsone
Government says situation in Myanmar is reminiscent of what happened in Rwanda and Bosnia LAGOS, Nigeria Nigeria has condemned the “ethnic cleansing” in Myanmar, calling on the UN to invoke the principle of “responsibility to protect” to rein in the security operations that have led to the forced displacement of Rohingya Muslims. “The Federal Government […]
မြန်မာနိုင်ငံမှာလူနည်းစုတွေအပေါ်နှိပ်ကွပ်မှုတိုးနေကြောင်း ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အစီရင်ခံစာ ထောက်ပြ
Posted on May 30, 2018 Author swelsone
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ တိုးတက်မှုမမြင်ရသေးဘူးလို့ အမေရိကန်အစိုးရက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ လူနည်းစုဘာသာကိုးကွယ်သူတွေကို လူမျိုးစုလိုက် ရှင်းလင်းဖယ်ရှားမှုတွေ ခုချိန်ထိရှိနေတယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်းနဲ့ အခုဆိုရင် ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာ နှိမ်နှင်းမှုတွေကို ၂ ဆတိုးလုပ်နေတယ်လို့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် သံအမတ်ကြီး Sam Brownback ကပြောကြားပါတယ်။ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် နိုင်ငံတကာ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်စဉ်မှာ ရိုဟင်ဂျာတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခြေအနေနဲ့ ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်း မီးမောင်းထိုးပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို မစုမြတ်မွန်က ဆက်ပြီးတင်ပြပါမယ်။ ကမ္ဘာတဝန်းက နိုင်ငံနဲ့ နယ်နမိတ်ပေါင်း ၂၀၀ က ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတွေကို တင်ပြထားတဲ့ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် နိုင်ငံတကာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာကို မေလ ၂၉ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ လူတိုင်းရဲ့ အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်တခုဖြစ်တဲ့ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုမြှင့်တင်ဖို့ အမေရိကန်အစိုးရက […]
Hasina calls Myanmar military’s disinformation regarding Rohingyas ‘disgusting’
Posted on September 10, 2017 Author swelsone
Bangladesh to reject China’s proposals on Rohingya crisis
Posted on November 18, 2017 Author swelsone